Boka Nhanganyaya - Shandong Lanbeisite Dzidzo Yezvigadzirwa Boka Co, Ltd.
LONBEST Boka rakagadzwa muna 2005 uye rakanyorwa pane NEEQ (National equities Exchange uye Quotations) ine stock code 832730 muna 2015. Iyo hofisi yemusoro iri muJinan, China.
Isu tiri hwepamusoro-tech bhizinesi rinogadzira ecological akangwara kudzidzisa michina. Inozvipira kuunza isina guruva, zvakatipoteredza, kunyora kwakangwara nemidziyo yekudzidzisa mumhuri yega yega, chikoro uye sangano.
Parizvino, isu tine vashandi vanopfuura mazana mana, makumi maviri neshanu mashandiro ekushandira pamwe nekugadzirisa nzvimbo, ine network yekutengesa inovhara matunhu 31 muChina, pamwe nenyika dzinopfuura gumi nematunhu pasi rese.
Isu takabudirira kuvaka isina-guruva mashopu eLCD Ekunyora Bhodhi yekugadzira muna2016, tichigadzira nguva nyowani yekunyora-isina guruva. Simba kugadzirwa kwechigadzirwa uye kugadzirwa kunoisa hwaro hwakasimba hwekukura mune ramangwana.
Muna 2018, boka rakaisa mari pamamirioni makumi matatu emadhora ekuAmerica kuvaka fekitori muJibei nzvimbo yekuvandudza yeJinan, Shandong Province. Iyo purojekiti inobata nzvimbo inosvika zviuru mazana matanhatu nemazana matanhatu emamita.
Unhu; Sevhisi; Kugadzira
LONBEST Boka ragara rakanamatira kune bhizinesi rezi "Hwekutanga Kutanga" kubvira pakagadzwa. Isu tinopa zvigadzirwa zvemakwikwi nekuvaka iyo QC timu yekuvandudza maitiro ekutarisa kwemhando, kusimbisa hutungamiri hwemhando, uye kuita kutariswa.
LONBEST yakagara ichitarisira zvinodiwa nevatengi seyvavariro yebasa. Mazana evashandi ari kupa basa revashandi nehupamhi hwakabatana uye hwakadzikama sevhisi. Zvichakadaro, yakasimba manejimendi manejimendi uye nzira dzekuongorora dzinodzorwa kuti dzipe hunyanzvi, panguva yakakodzera uye nebasa rakakura.
Boka reR & D rakazvimiririra rakazvimiririra kugadzira michina yakawanda yekugadzira. Zvigadzirwa zvakawana huwandu hwekugadzira patents, iyo inozadza akawanda zviga zvirongwa mumunda wezvigadzirwa zvekudzidzisa kumba nekune dzimwe nyika.
Tarisira kuve wakanyanya kukosha, anoremekedzeka zvakanyanya, uye ane hukama hwemagariro zvakanyanya mubhenji-yekumaka bhizinesi.
Ticharamba tichitora kudiwa kwevatengi sesimba rekufambisa, kuwedzera tekinoroji kutsvagurudza nekuvandudza kudyara, uye kuramba tichipa zvigadzirwa zvemakwikwi, zvakatipoteredza uye zvine hutano, mhinduro nemasevhisi ekudzidzisa kwemhuri, kudzidzisa kwechikoro uye bhizinesi rebhizinesi, kugadzira kukosha kwevatengi uye kuve anonyanya kukosha magumo chigadzirwa mutengesi uye webasa mubatsiri mumunda wekudzivirirwa kwezvakatipoteredza vakangwara kudzidza kunyora. Isu tinotsigira kukosha kukosha kwekuvhurika, kushandira pamwe uye kuhwina-win mibairo. Isu tinoda kushandira pamwe nevabatsiri kuvandudza uye kushanda pamwe chete kuwedzera kukosha kwemaindasitiri, kusimudzira kugona kwakanaka kwemaindasitiri nekusimudzira kufambira mberi kwenzanga.
Shumira Dzidzo, Batsira Ramangwana
Mushure mekukurumidza uye kutsiga kukura kweanopfuura makore gumi, LONBEST yakanyorwa pamusika we NEEQ mugore ra2015, uye yakayerwa seimwe ye "Innovative brand pakati pemabhizimusi epamusoro zana" muna 2016. LONBEST iri kutungamira musika muminda yeLCD kunyora bhodhi nemidziyo yechikoro. Mune ramangwana, isu tinogadza rakakura rekushambadzira chikuva kunoenderana nekuvandudzwa kwemusika wepasi rose. Mamwe matarenda akakosha uye tekinoroji yepamusoro ichaunzwa Isu tinovavarira kutanga bhizimusi rekuvandudza rakasarudzika nekuvandudza hutano hwevashandi nekuita mamwe mabasa echivanhu nekupa mipiro kuminda yedzidzo nekunyora minda yemabhodhi.